04W « MMWeather Information BLOG
တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင် လေဖိအားနည်းဆဲလ် 94W – ၂၄ နာရီအတွင်း မုန်တိုင်းဖြစ်လာမည်
တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် လေဖိအားနည်းဆဲလ် 94W မှာ ပိုမိုအားကောင်းလာပြီး ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မနီလာမြို့တော် အနောက်-အနောက်မြောက်ဘက် ၄၉၅ မိုင်ခန့်၊ ဟောင်ကောင်၏ တောင်-အရှေ့တောင်ဘက် မိုင် ၈ဝဝ ခန့်၊ ဗီယက်နန်နိုင်ငံ ဒါနန်းမြို့ အရှေ့ဘက် မိုင် ၈၉ဝ ခန့် တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်တွင် ဆက်လက်တည်ရှိနေပါသည်။ လေဖိအားနည်းဆဲလ် 94W သည် ပိုမိုအားကောင်းလာပြီး ၂၄ နာရီအတွင်း မုန်တိုင်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေအဆင့် HIGH သို့ ရောက်ရှိနေကြောင်း JTWC မှ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖေါ်ပြထားပါသည်။ ပုံ – ၁
ဖိလစ်ပိုင်မိုးလေဝသဌာနမှ သတိပေးထုတ်ပြန်ချက် အမှတ်-၁ အား ထုတ်ပြန်ထားပြီး လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအမည်အား FABIAN ဟု ပေးထားပါသည်။ ၄င်း ထုတ်ပြန်ချက်ပုံအရ 94W . . . → Read More: တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင် လေဖိအားနည်းဆဲလ် 94W – ၂၄ နာရီအတွင်း မုန်တိုင်းဖြစ်လာမည်
Leaveacomment Uncategorized တောင်တရုတ်ပင်လယ်၊ ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်နှင့် မြန်မာ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင် အခြေအနေ
By mmweather.ygn, on June 19th, 2013%
ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်တွင်ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် မုန်တိုင်း LEEPI နှင့် တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် လေဖိအားနည်းဆဲလ် INVEST 94W တို့၏ အခြေအနေများကို ဇွန်လ ၁၉ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နေ့လည် ၁၂၃ဝ နာရီတွင် ရရှိသည့် အချက်အလက်များအား ကိုးကားပုံဖေါ်၍ တင်ပြပေးပါမည်။
အပူပိုင်းမုန်တိုင်း 04W LEEPI(EMONG) ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် အပူပိုင်းမုန်တိုင်း Tropical Storm 04W(LEEPI) သည် လွန်ခဲ့သည့် ၆ နာရီအတွင်း မြောက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ရွေ့လျားခဲ့ပြီး၊ ထိုင်ဝမ်ကျွန်း၊ တိုင်ပေမြို့ အရှေ့တောင်ဘက် မိုင် ၄၈ဝ ခန့်တွင် ဗဟိုပြုလျှက်ရှိပါသည်။ မုန်တိုင်း LEEPI သည် မြောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားပြီး ဂျပန်နိုင်ငံ Miyako-Jima ကျွန်းစုအနီးမှ ဖြတ်သန်း၍ အရှေ့တရုတ်ပင်လယ်သို့ . . . → Read More: တောင်တရုတ်ပင်လယ်၊ ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်နှင့် မြန်မာ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင် အခြေအနေ
Leaveacomment Uncategorized Tropical Storm 04W – LEEPI ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ဦးတည်ရွေ့လျားလျှက်ရှိ
အပူပိုင်းမုန်တိုင်း LEEPI(ဖိလစ်ပိုင်အမည်ဖြင့် EMONG) 04W သည် ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်ပြင် မြောက်ပိုင်းတွင် ဆက်လက်တည်ရှိနေပြီး နောက် ၂ ရက်အတွင်း အားပိုမိုကောင်းလာကာ မုန်တိုင်းဗဟိုတွင် လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီ ၉၅ ကီလိုမီတာအထိ ရှိလာမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဂျပန်နိုင်ငံ အိုကီနာဝါ-ရုကျု ကျွန်းငယ်လေးအနီးမှ ဖြတ်သန်းပြီးနောက် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ အဓိက ကျွန်းမကြီးများ ဖြစ်ကြသည့် ကျုရှု၊ ရှိကိုကု နှင့် ဟွန်းရှု ကျွန်းများ၏ တောင်ပိုင်းကမ်းရိုးတန်းအနီးမှ အလျားလိုက် ဖြတ်သန်းတိုက်ခတ်ပြီးနောက် လာမည့် သောကြာနေ့(၂၁-၆-၁၃)တွင် အားပျော့သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ခန့်မှန်းထားပါသည်။(ပုံ – ၁) နောက်ဆုံးရရှိသည့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မိုးလေဝသဌာနခန့်မှန်းချက် – အမှတ်(၄)အရ မုန်တိုင်းဗဟိုလေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီ ၆၅ ကီလိုမီတာမှ ၈၅ ကီလိုမီတာနှုန်းရှိပြီး မုန်တိုင်းအရွယ်အစား အချင်း ၉၃၅ . . . → Read More: Tropical Storm 04W – LEEPI ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ဦးတည်ရွေ့လျားလျှက်ရှိ
Leaveacomment Uncategorized 04W မုန်တိုင်းအဆင့်သို့ ရောက်ရှိလာပြီ
ဇွန်လ ၁၈ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နေ့လည် ၁၂၃ဝ နာရီတွင် ရရှိသည့် အချက်အလက်များအရ ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်တွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 04W(FOUR – ဖိလစ်ပိုင်အမည် EMONG) သည် ပိုမိုအားကောင်းလာပြီး အပူပိုင်းမုန်တိုင်း လီပိုင် (04W – LEEPI) အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိလာပြီ ဖြစ်ပါသည်။ “လီပိုင်” ဟူသော အမည်သည် လာအိုနိုင်ငံ တောင်ပိုင်းမှ အလွန်လှပသည့် ရေတံခွန်တစ်ခု၏ အမည်ဖြစ်ကြောင်း မှတ်သားရပါသည်။
Tropical Depression 04W [EMONG] has continued its northerly track across the North Philippine Sea, east of Isabela…may becomea. . . → Read More: 04W မုန်တိုင်းအဆင့်သို့ ရောက်ရှိလာပြီ
Leaveacomment Uncategorized ဖိလစ်ပိုင်မှ INVEST 91W သည် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း TD 04W ဖြစ်လာပြီး မုန်တိုင်းငယ်အဆင့်သို့ ရောက်လာမည်
Leaveacomment Uncategorized အဆင့်-၃ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း MAWAR – အိုကီနာဝါကျွန်းအား စ ၍ တိုက်ခတ်နေပြီ
By mmweather.ygn, on June 4th, 2012%
ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်တွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း MAWAR(04W – ဖိလစ်ပိုင်အမည် AMBO) သည် အဆင့်-၃ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကြီး ဖြစ်လာပြီး မြောက်-အရှေ့မြောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီ ၁၅ ကီလိုမီတာနှုန်းဖြင့် ဆက်လက် ရွေ့လျားလျှက်ရှိကြောင်း၊ မုန်တိုင်းအရွယ်အစားမှာလည်း ပိုမို ကြီးမားလာပြီး အချင်း ၇၉၅ ကီလိုမီတာ(၄၃၀ နော်တီကယ်မိုင်) ရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်း၊ မုန်တိုင်းဗဟိုတွင် လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီ ၁၁၅ မိုင်မှ ၁၄၅ မိုင်နှုန်းအထိရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ T2K မှ ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။
NRL data အရ ဇွန်လ ၄ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၇ နာရီခွဲတွင် အဆင့်-၃ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း MAWAR သည် အိုကီနာဝါကျွန်း၏ တောင်-အနောက်တောင်ဘက် ၄၈၅ ကီလိုမီတာခန့်(၃၀၀ မိုင်ခန့်) . . . → Read More: အဆင့်-၃ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း MAWAR – အိုကီနာဝါကျွန်းအား စ ၍ တိုက်ခတ်နေပြီ
Leaveacomment Uncategorized တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း MAWAR နှင့် မြန်မာ့ ကမ်းရိုးတန်းမှ တိမ်တိုက်များ အခြေအနေ
Leaveacomment Uncategorized အရွယ်ကြီးလာသည့် တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း MAWAR
By mmweather.ygn, on June 2nd, 2012%
ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်မှ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း MAWAR (04W)(ဖိလစ်ပိုင်အမည် AMBO) သည် ပိုမိုအားကောင်းလာနေပြီး မူလခန့်မှန်းထားသည့် လမ်းကြောင်းအတိုင်း ဆက်လက်ရွေ့လျားနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ မုန်တိုင်း အရွယ်အစား အချင်း ကီလိုမီတာ ၅၀၀ အထိ ရှိလာသောကြောင့် ၄င်း ဖြတ်သန်းရွေ့လျားမည့်လမ်းကြောင်းပေါ်မှ Ishigak-Shima, Miyako Jima နှင့် Okinawa ကျွန်းများသည်လည်း မုန်တိုင်း လေပြင်း တိုက်ခတ်ခံရဘွယ်ရှိနေပါသည်။
T2K မှ ခန့်မှန်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင်လာမည့် တနင်္လာနေ့ ညနေပိုင်း မတိုင်မီ (၂၄ နာရီအတွင်း) အဆင့်-၂ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း အဆင့်သို့ ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်ပါသည်။ လာမည့် ၃၆ နာရီ နောက်ပိုင်း တွင် အိုကီနာဝါကျွန်းအနီး သို့ အဆင့်-၂ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း အဖျားပိုင်း စတင်ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ၄၈ . . . → Read More: အရွယ်ကြီးလာသည့် တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း MAWAR
Leaveacomment Uncategorized ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာမြောက်ပိုင်းမှ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း FOUR အပူပိုင်းမုန်တိုင်း MAWAR ဖြစ်လာ
By mmweather.ygn, on June 1st, 2012%
ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်ပိုင်း၊ ဖိလစ်ပိုင် ပင်လယ်တွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း FOUR သည် ဇွန်လ ၁ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၀၀း၂၀ နာရီတွင် စတင်၍ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအဆင့် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး၊ ပိုမိုအားကောင်းလာကာ ဇွန်လ ၁ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နေ့လည် ၁၂၃၀ နာရီ မှ စတင်၍ အပူပိုင်းမုန်တိုင်း MAWAR ဖြစ်လာပါသည်။ အပူပိုင်းမုန်တိုင်း MAWAR သည် လာမည့် ၃၆ နာရီအတွင်း ပိုမိုအားကောင်းလာပြီး အဆင့်-၁ တိုင်ဖွန်းမန်တိုင်းအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အဆင့်-၁ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း အဆင့်ရောက်လာမည့် အချိန်တွင် မုန်တိုင်း ဗဟိုသည် 18.5 N နှင့် 124.6 E သို့ ရောက်ရှိ ဗဟိုပြုပြီး . . . → Read More: ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာမြောက်ပိုင်းမှ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း FOUR အပူပိုင်းမုန်တိုင်း MAWAR ဖြစ်လာ